ဇူလိုင်လ 2018 |3၏စာမျက်နှာ 110 NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » ဇူလိုင်လ (စာမျက်နှာ 3)
အဖြစ်မှန်တီဗီ sizzle reel များအတွက်ဓါတ်ပုံ / ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်၏ non-ပြည်ထောင်စုဒါရိုက်တာ
ရာထူး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကအဖြစ်မှန်စီးရီးလေယာဉ်မှူး / sizzle reel စီမံကိန်းကို shoot ကိုကူညီမယ့်ဖန်တီးမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအတွေ့အကြုံကို DP ရှာနေကြသည်ချီကာဂို IL အမေရိကန်: Baggett မီဒီယာ Productions တည်နေရာ: အဖြစ်မှန်တီဗီ sizzle reel ကုမ္ပဏီများအတွက်ဓါတ်ပုံ / ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်၏က Non-ပြည်ထောင်စုဒါရိုက်တာ။ ဒါကပိုကြီးသို့ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံကသုံးနေစဉ်သင်၏ခြေစိုစွတ်သောရရှိရန်အလွန်ကြီးစွာသောအနေအထားဖြစ်ပါတယ် ...
ရေဒီယိုပရိုမိုးရှင်း International (2018 Fall)
ရာထူး: ရေဒီယိုပရိုမိုးရှင်း International (2018 Fall) ကုမ္ပဏီ: Sinclair အသံလွှင့်အုပ်စုတည်နေရာ: ဆီယက်တဲလ် WA အမေရိကန်အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၌သင်တို့၏အမှတ်အသားလုပ်ပါ။ Sinclair အသံလွှင့် Group နှင့် Sinclair ဒစ်ဂျစ်တယ် Solutions Sinclair ဆက်သွယ်ရေးအင်အားကြီးအောင်မှဆက်ကပ်အပ်နှံထားများမှာ! ကျနော်တို့တိုင်းပြည်အတွင်းအကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးပိုမိုစုံလင်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ Sinclair ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်, ပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမှန်ဆောင်မှုပေးပါသည် ...
Video Editor / ဗီဒီယို Colorist / ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်
ရာထူး: Video Editor / ဗီဒီယို Colorist / ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ကုမ္ပဏီ: WeatherTech တည်နေရာ: Bolingbrook IL အမေရိကန်ဗီဒီယို Editor ကို / ဗီဒီယို Colorist / ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် WeatherTech အမေရိကန်စေ Automotive ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာအရည်အချင်းပြည့်ဗီဒီယို Editor ကို / ဗီဒီယို Colorist / ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ဖျော်ဖြေဖို့ရှာကြံနေပါတယ် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့် post-ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကိုနှင့်နည်းပညာတတ်လွယ်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်သူ / ဒါရိုက်တာကိုထောကျပံ့ဖို့။ ဤသည်နှင့်အတူတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ် ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတည်နေရာ:: ကလေးများသည် Albuquerque မိုင်အမေရိကန်ဗီဒီယိုကိုစက်ရုံ 1997 ၌တည်ဒေသခံကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီအပေါ်အခြေခံပြီးသည် Albuquerque, တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကပြီးနောက်ကျောင်းအစီအစဉ်ကိုပြီးတဲ့နောက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် Animation ရဲ့သင်ပေးဖို့လုံ့လရှိသူကလူကိုရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်ကျောင်းအစီအစဉ်အရှင်ဘုရားကုမ္ပဏီပြီးနောက် လာမည့်စာသင်နှစ် 2018-19 များအတွက်ကျောင်းစာအုပ်အစီအစဉ်။ 8-15 သားသမီးများ၏ Group မှအရွယ်အစား, 8 နှင့် 14 အကြားအသက်အရွယ်။ အလုပ်အဖွဲ့ ...
ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း - Internship / စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်း
ရာထူး: ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး - Internship / စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများကုမ္ပဏီ: Denver တည်နေရာ၏ City နှင့်ကောင်တီ: Denver CO အမေရိကန်ကြှနျုပျတို့အကွောငျးလျှို့ဝှက်ချက်ထွက်သည်: Denver, အသက်ရှင်ရန်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်အလုပ်နှင့်ကစား။ အသက်ရှင်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ခြင်းလွယ်ကူသည်မဟုတ်, ထိုကဲ့သို့သောဂုဏ်သတင်းကိုထိန်းသိမ်းကျနော်တို့ Denver ၏နေထိုင်သူများအဘို့အလုပ်လုပ်အကောင်းဆုံးကိုလူတွေမလိုအပ်ဆိုလိုသည်။ လိုခငျြသူမြားကလူ ...
ရာထူး: ဧည့်ကြို (အပိုင်း-အချိန်) ကုမ္ပဏီ: Aesthetic အလေ့အကျင့်တည်နေရာ: အဆိုပါ Woodlands TX အမေရိကန်တပ်ဦးစားပွဲခုံမန်နေဂျာ / စိတ်ရှည်ဝန်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးမှူး။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့ကျွမ်းကျင်မှုကောင်းသော။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ: ရုံး (Word နဲ့ Excel), ကို Adobe InDesign, Photoshop နဲ့ထုတ်ဝေသူ။ attributes: (ရည်မှန်းချက်ကြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ, နှိမ့်ချ, စိတ်အားထက်သန်မှု, ရိုးသားမရှိဘဲ, ကို Creative, ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သော, မည်ဟုယုံမှားခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သော) ။ သုံးနှစ်အရှေ့တွင်စားပွဲခုံအတွေ့အကြုံကို။ လူမှုမီဒီယာနားလည်တတ်ကျွမ်း။ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ထုတ်ကုန်ရောင်းချအကြောင်းကိုအသည်းအသန်။ ယောဘသည်အမျိုးအစား: အပိုင်းအချိန် ...
ရာထူး: အသံဒီဇိုင်း Internship ကုမ္ပဏီ: အမှောင် Catt Studios ကတည်နေရာ: မှောင်မိုက်ကို CATT အကြောင်းစိန့်ချားလ်စ် IL အမေရိကန်: အမှောင် Catt စတူဒီယိုတစ်ခုလွတ်လပ်စွာပိုင်ဆိုင်နှင့်ချီကာဂိုအတွက်မာလ်တီမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ operated ဖြစ်ပါတယ်။ 2012 အတွက်၎င်း၏နှိမ့်ချစ မှစ. လွတ်လပ်သောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနှင့်အလွတ်တန်းကဗီဒီယိုသတင်းစာပညာရိုက်ကူး, အမှောင် Catt Studios ကပိုပြီးဖန်တီးမှုစီမံကိန်းများအပေါ်ယူလာခဲ့သည်။ အဆိုပါစတူဒီယိုယခုအများအပြားလုပ်ငန်းများရှိပါတယ် ...
3 ၏စာမျက်နှာ 110«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»